မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာမခံလုပ်ငန်းပြပွဲကြီးကျင်းပ[ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်] – AYA Myanmar Insurance
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာမခံလုပ်ငန်းပြပွဲကြီးကျင်းပ[ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်]
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာမခံလုပ်ငန်းပြပွဲကြီးကို ယနေ့ (၂၆.၁.၂၀၁၇) မန္တလေးမြို့ (မြို့တော်ခန်းမ ) ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ ဧရာမြန်မာအာမခံမှ အာမခံဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ထည့်သွင်း ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂၆.၁.၂၀၁၇) မှ (၄.၂.၂၀၁၇) ကာလအတွင်း အာမခံထားရှိသူများကို ပေးသွင်း ရမည့် ပရီမီယံကြေးအပေါ်တွင် ၁၀%လျော့၍ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြပွဲကာလအတွင်း အာမခံထားရှိသူများကို ဧရာမြန်မာအာမခံမှ နေ့ချင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးခြင်း များ ပါဝင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဧရာမြန်မာအာခံ booth နေရာလေးကို ကြွလှမ်းခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
← AYA Financial Group ဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဇော် နှင့် အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့ရှိ Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း [ အင်္ဂါနေ့ ၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ]
ဧရာမြန်မာအာမခံ၏ နေပြည်တော်ရုံးခွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ[ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်] →
6 thoughts on “မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အာမခံလုပ်ငန်းပြပွဲကြီးကျင်းပ[ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်]”
Excellent goods from you, man. I have take into accout your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you’ve received here, certainly like what you’re saying and the way by which you are saying it. You are making it entertaining and you still care for to stay it wise. I can’t wait to read much more from you. This is reallyawonderful website.
Asking questions are really good thing if you are not understanding something entirely, however this article provides nice understanding even.
Good day very cool site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I am happy to search out so many useful information here within the submit, we need develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .